Amisom oo Ka Hadashay Bixitaanka Ciidanka Ethiopia
Le général de brigade Anthony Ngere, à gauche, de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) discute avec ses officiers supérieurs au quartier général secteur de l’Amison dans la ville de Dhobley, Somalie, 30 septembre 2012. EPA / UA-ONU IST PHOT
Ciidamada Ethiopia ayaa maalmahanba waxa ay ka baxayeen saldhigyo ay ka degganaayeen gudaha Soomaaliya taasoo keentay in meelihi ay faarujiyeen ay qabsadaan maleeshiyada Al Shabaab.
Dadka deegaanada ay ka bexeen ku noolaa ayaa qaarkood loo diley sababo ku aadan inuu ku dhawaa ama uu taageersanaa ciidamada Ethiopia. Dad badan ayaa la sheegay in ay dantu ku kalliftay in ay barakacaan.
Haddaba arrintaan ayaa waxaa ka hadlay taliska ciidanka nabad ilaalinta Midowga Africa ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AMISOM. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Jacfar Kuukaay.
Dhageyso warbixinta AMISOM ee ciidamada Itoobiya